Etu ị ga-esi weghachite okpukpu abụọ na LG G2 | Gam akporosis
Etu ị ga-esi nwetaghachi okpukpu abụọ na LG G2 iji gbanye ihuenyo ma gbanyụọ
Francisco Ruiz | | LG, Nkuzi
O yikarịrị ka mgbe ọ gachara gbanye LG G2 Site na Rom esiri esi na ngwa LG ma ọ bụ ọbụlagodi ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị na LG G3, ọ tụrụ anyị n'anya. ahụhụ anyị na-enweghị ike igbachi ma ọ bụ kpọghee ọnụ anyị site na iji arụmọrụ okpukpu abụọ na ihuenyo.
Na nkuzi ohuru a, nke bara uru, nke dị mfe iji, aga m akuziri gị ụzọ dị mma weghachite okpukpu abụọ na LG G2 iji gbanyụọ na ihuenyo ahụ nke ihe egwu gam akporo anyi nwere. Ya mere, ọ bụrụ na ị hụla nsogbu ahụ ma ọ bụ ahụhụ ahụ na mberede, ana m enye gị ndụmọdụ ka ị ghara ịlafu nkọwa ọ bụla nke ihe m ga-akọwa n'okpuru ebe ọ ga-abụ nnukwu enyemaka nye gị.
Ihe mbụ m ga-agwa gị ma dọọ gị aka ná ntị, ọ bụ na weghachite okpukpu abụọ na LG G2 iji gbanyụọ na ihuenyo ahụ, anyị agaghị ebudata mmemme ọ bụla ma ọ bụ ngwa ọ bụla, anyị ga-enweta naanị menu ọrụ LG zoro ezo, nke anyị ga-esi nwetaghachi ya site na ịpị otu nhọrọ.
Ọ na-aga n'ekwughị nke ahụ na nke a LG ọrụ menu emetụla ma ọ bụ metụ ihe ọ bụla na-amaghị ma ọ bụ mara na ọ bara uru ebe ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịhazigharị ụfọdụ ọrụ dị mkpa maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke LG G2 anyị.
Naanị ihe anyị ga - eme bụ imepe mpempe akwụkwọ nke LG G2 anyị ma pịnye koodu ndị a na ya:
3845 # * LG G2 # nlereanya
N'ụzọ ezi uche dị na ya, anyị ga-eji dochie ebe ọ na - ekwu "LG G2 Model" site n'ụdị akọwapụtara nke ọnụ anyị, na nke a, ọ ga - abụ ụdị D802 ka anyị wee pịnye ihe ndị a:
Naanị ịpị koodu ahụ na dialer anyị, nchịkọta nhọrọ ọhụrụ ga-apụta nke zoro ezo. Nke a bụ menu ọrụ LG nke anyị ga-esi nweta ya idozi okpukpu abụọ ka ị kpọchie ma kpọghee LG G2.
Ozugbo n'ime nke a Zoro NchNhr anyị ga-aga n'ihu pịa nhọrọ Settings:
Mgbe ahụ, anyị ga-agbada ruo mgbe anyị chọtara nhọrọ ahụ kwuru Mmelite emetụ femụwe:
Anyị ga-pịa ya, na o doro anya na, ọ bụ ezie na o yiri ka ọ dịghị ihe ọ bụla mere, mgbe ịmalitegharị LG LG anyị anyị nwere ike ịlele otu Pịa okpukpu abụọ ka ị kpọchie ma kpọghee LG G2 na-arụ ọrụ ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Etu ị ga-esi nwetaghachi okpukpu abụọ na LG G2 iji gbanye ihuenyo ma gbanyụọ
Enwere m nsogbu ahụ m na-etinye koodu na dialer ịkpọ ma menu ezoro ezo apụtaghị, m na-agba ọsọ mbilite n'ọnwụ remix 5.1 na lg g2 m mana ihe nlereanya m bụ 802 mana m na-etinye koodu ahụ na menu zoro ezo adịghị gosi, nyere m aka! !!
Ndewo, achọrọ m ịma ka esi kwụsị mgbatị abụọ
Magburu onwe, daalụ nke ukwuu!
ekele dị ukwuu
Lee ka o si dị ebube! Enwere m ihe ọhụrụ, echere m na ọ rutela nkwarụ, ọ rụrụ ọrụ na obere oge echere m na m ga-ewepụ ya n'ụzọ ụfọdụ mgbe ibudata ngwa ngwa ahụ na jelii agwa iji nwee ike ịkwado Adobe Flash player, ọ nyeere m aka otutu. Daalụ nke ukwuu!
thanksssssssss i bu onye amamihe !!!!!!!!!!!!
Ndewo, olee otu m si mara koodu m? Daalụ
Ndewo, ekwentị m bụ LG g2 mini, agbasoro m usoro itinye koodu m ma edozighi ya. Enwere ihe ngwọta ọzọ?
Nke m bukwa g2 Obere ma enwetabeghi m ya, uzo ozo ozo?
ezi m nwere lg g2 D800 ọ naghị arụ ọrụ maka m otu a nyere m aka
Gbalia usoro a na lg g2 mini
Ma e dozighị ya. Ihe ngwọta ọ bụla ọzọ?
Ọ ga-arụ ọrụ na LG G3 gbagwojuru D722p ??
ị bụ ezigbo corduroy ekele
Kedu ka m ga - esi mee ya naanị iji 2G ebe akara 3G adịghị mma ma achọrọ m ịnweta ya naanị na 2G
Zaghachi Raul Fernandez
LG G4 na-ebupụta nkwado pụrụ iche yana akwụkwọ ikike ọzọ
Zọ kachasị mma iji melite LG G2 na gọọmentị gam akporo Lollipop